Axmed Xasan Cawke – Wajibad
”Allaha u naxariistee weriye Axmed Xasan Cawke wuxuu ku geeriyooday magaalada Jigjiga ee ismaamulka Soomaalida Ethiopia maalinta Talaadada 17 November 2015.”
Zakariya Axmed Xasan Cawke
Wiil uu dhalay Marxuun Axmed Xasan Cawke oo buuxiyey shaqadii aabihii iyo Wasiir Cuskuse oo ka hadla.
Allaha u naxariistee weriye Axmed Xasan Cawke oo ka mid ahaa weriyayaasha ugu caansanaa kuwa Soomaalida ayaa saaka ku geeriyooday magaalada Jigjiga ee ismaamulka Soomaalida Ethiopia.
Axmed Xasan Cawke oo ka tirsanaan jiray VOA Somali ayaa waxaa kusoo booday xanuun lama filaaan ah, sida uu VOA-da u sheegay weriye Cabdisalaam Hareeri oo ay muddo wada shaqeynayeen.
Cawke waxa uu ifka kaga tagay xaas iyo lix caruur ah.
Axmed Xasan Cawke ayaa lasoo shaqeeyey hay’ado warbaahineed oo ay ka mid yihiin VOA Somali, Radio Muqdisho, BBC Somali iyo Taleefishinka Universal Tv..
Waxaa la filayaa in maanta lagu aaso magaalada Wajaale.
Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixintan ka diyaariyey taariikh nololeedka Axmed Xasan Cawke.
Talaado, November 17, 2015
Warbixinno la xiriira taariikhdiisa Axmed Xasan Cawke kala soco Hiiraan Online haddii ALLE ogolaado.
Geerida Weriye Marxuum
Iyo Dhanbaaladii Tacsiyaha
Magaca wariyaha: Axmed Xasan Cawke.
Ku geeriyiiday: Magaalad Jigjiga [Ismaamulka Soomaalida Itoobiya]
Taariikhda: Talaado 17 Dicember 2015
Guddoomiyaha KULMIYE, ahna murrashaxa jagada madaxweyne ee xisbigaasi Md. Muuse Biixi Cabdi, ayaa tacsi uu diray kadib ka warramay aqoontii uu u lahaa Axmed Xasan Cawke, waxaannu yidhi;
Yoonis Cali Nuur
Siciid Cali Muuse iyo
Maxamed Maxamuud Ducaale,
Waxaannu isugu nimi dugsigii Camuud ee Boorama sannadkii 1966 iyo 1967, aniga iyo Cawke isku fasal baanu ahayn oo waqtigaa ilaa maanta (shalay) oo uu dhintay inta badan aannu wada joognay, muddadaa dheer ee aan aqaanay oo ilaa afartan sanno ah weli Axmed Xasan oo cid la kala hayo maan arag, wuxuu ahaa addoon Ilaahay siiyey dabeecadda dadka iyo xidhiidhkooda, mar walba farxaan ah, cid walba raaligelinaya, taasina waa ta uu ku kasbaday maanta in wixii Af-soomaali yaqaanna oo dhan qof waliba dareemayo inuu isaga la saaxiib ahaa, wuxuu ahaa nin intii uu noolaa u soo shaqeeyey ummadda Soomaaliyeed afkeeda, is dhexgalkeeda iyo wada xidhiidhkeeda.”
Taariikh Nololeedkii Marxuum
Axmed Xasan Cawke oo kooban
Sheekhu wuxuu marxuumka Ilaahay uga baryey inuu naxariistiisa Janno ka waraabiyo, ehelka, carruurta, qaraabada iyo ummadda uu ka baxayna samir iyo iimaan ka siiyo. Aamiin.. Aamiin…
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa tacsi u diray shacabka, qoyska iyo ehelada uu ka geeriyooday weriye Axmed Xasan Cawke oo ka mid ahaa hawl wadeennada kaalinta weyn ka soo qaatay saxaafadda Soomaaliya.
Ina-Xasan-Cawke: Xarragadii Iyo Xaash-Xaashkii Makrifoonka (1948kii – 2015ka)
Qalinka: Boobe Yuusuf Ducaale – Qormooyinkii 1aad iyo 2aad
Marxuum Axmed Xasan Cawke‘Innaa Lillaah wa innaa ileyhi raajicuun.’ Waa geeri iyo camalkeed. Aan ku cudur-daarto tuduc aad u gaaban oo ku jiray maansadii Daalacan ee Hadraawi oo ah:
Sidii dhaqanka iyo caadadaba ii ahayd waxaan toosay goor hore oo aan dhegaystay qaybo afafka qalaad ah oo BBC-da ah ka dibna u digo-rogtay VOA-da oo 6.30ka subaxnimo soo gasha. Wararka ka-sokow waxaan aad u xiiseeya heesta lagu soo khatimo oo mararka qaarkood ku aroorinaysa oo waayo-waayo ku xusuusinaysa.
Waxaanan illoobayn Cabdi-qays iyo Aamina Canbdillaahi oo aroor dhaweyd hees kala roganayay. Waxaan is-idhi waa bilowgii lixdankii iyo magaalada Jabuuti. Inta aan subaxdaa iska daayay BBC-dii Soomaaliga ahayd ayaan dhakhso u baxay aniga oo Xisbiga Waddani ballan adag ku lahaa. Guddi gacanta ku haysay qabyo-qoraalkii Barnaamajka Wax-qabad ee Xisbiga Waddani ayaan la ballansanaa. Xafiiskii markii aan tegay ayaan arkay iyagii oo aan weli iman.
Axmed Xasan-cawke wuxu ka mid noqday weriyayaasha ugu fiican xagga tebinta ciyaaraha oo aan filayo in uu kaga deyday Weli Xaaji Cali oo cod degdeg ah oo cagta ama gacanta kubbadda wadata la xawliya ku gudbin jiray wararka ciyaaraha. Waxaan Dugsiga Sare ee Benaadir oo Muqdisho ku yaalla ku jiray 1964kii – 1968kii. Garoon kubbadeed ayaa dugsiga noogu yaallay oo aanu galbaha qaar kubbad ku ciyaari jirnay. Waxaan xusuustaa in uu noo iman jiray Weli Xaaji Cali oo rikoodh UHR ah sitaa oo kuwii cajaladaha waaweynaa ah.
Halkaas ayuu annaga oo ciyaarayna ku baran jiray sida ciyaaraha wararkooda loo gudbiyo. Mararka qaarkood carruurta daawnaysa ayuu urursan jiray oo ku odhan jiran qaylo iyo sawaxan sameeya oo uu ka duubi jiray. Weli Xaaji Cali waa ninkii ciyaarihii gobollada oo la ciyaarayo oo ay isku haleeleen koox reer woqooyi ah iyo mid reer koonfureed ahi inta uu is-illoobay yidhi: “Innaga aya wadanna.”